Filtrer les éléments par date : mardi, 04 août 2020
Le Président Andry Rajoelina accompagné de son épouse,Mialy Rajoelina, s"est rendu hier au chevet des plus démunis du Fokontany IIC Manjakaray. Ce fut une occasion pour le Président d’échanger directement avec la population et de distribuer des vivres et des enveloppes aux familles nécessiteuses de ce quartier.
Le Président Andry Rajoelina a annoncé que ces derniers ne seront pas mis à l'écart par rapport aux aides sociales opérées par l'État pour faire face à la pandémie du Covid-19. Comme les habitants des autres arrondissements de la capitale, ils recevront aussi leur part de « Sosialim-bahoaka » en guise de soutien dans le cadre de cette crise sanitaire.
mardi, 04 août 2020 21:44
Antoko TIM: Tsy miray tsikombakomba amin’ny tsy fahombiazana mikasika ny Covid-19
Nanao fanambarana ny antoko Tiako i Madagasikara TIM, tamin’ny alalan’i Riana Randriamasinoro, Sekretera jeneralin’ny antoko, milaza fa « Tsy miray tsikombakomba amin’izay mety ho tsy fahombiazana amin’ny fitantanana ny fanampiana avy amin’ny mpiara-miombon’antoka amintsika mikasika ny Covid-19, fa mitaky kosa ny fijoroan’ny fanjakàna amin’ny teny izay nataony hoe « izahay izao no mitondra ».
Koa dia raiso ny andraikitrareo manoloana izay safidy efa noraisinareo hatrany ampiandohana, ary mbola manamafy hatrany ny fitakiana ny mangarahara ».
mardi, 04 août 2020 21:38
Conseil du Fampihavanana Malagasy: Hatramin’izao tsy mbola nandray karama ny Mpikambana
Misedra olana ara-bola ny CFM (Conseil du Fampihavanana Malagasy). Vokany, tsy mbola nandray karama volana jolay ireo mpikambana izay efa zatra mandray izany manodidina ny faha-20 ny volana diavina eo, tsy mbola nandray tambinkarama ihany koa ireo mpiara-miasa toy ny « Assistants ».
Olombelona miisa 200 eo ho eo no voakasik’io. Efa hananika ny taona iray ihany koa no tsy nisitraka ny tambiny ara-bola ho an’ny saram-pifandraisana sy solika fandray isam-bolana ireo mpikambana ao amin’ity andrimpanjakana mpanajary ny fampihavanam-pirenena ity.
Mianto-tena ireo mpikambana mamita iraka manerana ny Nosy. Mitarazoka ela ny fanonerana ny lany mikasika izany, hoy ny loharanom-baovao.
Eo ny goragora amin’ny resa-pitantanana anatiny ao amin’ny CFM, fa vao mainka nampitarazoka sy mahasarotra io fandoavan-karama io ny fitakiana pitsopitson’ny lalàna.
mardi, 04 août 2020 21:18
Le remaniement est imminent, selon un journal pro-régime
"Remaniement imminent: qu’un vrai leader soit à la tête du ministère".
C’est le grand titre à la une du journal proche du régime "La Vérité" de ce mardi 4 août.
"L’indéfini (un leader) associé au défini (du ministère) dans le titre et la photo d’illustration" – montrant une vue plongeante sur les bâtiments du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle à Anosy – semblent indiquer que le remaniement concerne plus particulièrement ces départements fusionnés en un seul.
mardi, 04 août 2020 21:17
Tongasoa Christophe Bélier
Toujours fidèle à nos valeurs, Gasypatriote, site d'information en temps réel, site d'éducation des citoyens, renforce son équipe pour vous apporter différents points de vue, à chacun par après de se faire une opinion sur la situation socio-politique et économique du pays.
Christophe Bélier, un analyste politique, va conjuguer avec Anonymous notre éditorial en français.
Nalaky heno ny fikotrokotrohana varavarana, raha tsy izany dia efa tafiditra an-trano ny jiolahy mirongo fiadiana toy ny antsy lava.
Notsofina avy hatrany ny kiririoka ka nandositra niaraka tamin’izay ny mpanafika miisa dimy.
Tavela teo ny ampahany tamin’ny fitaovam-piadiana nentin’ireo nanana teti-dratsy.
Nigadona vetivety ihany koa ny Zandary nantsoina. Natao ny fanarahan-dia, saingy efa tsara fiafenana ny olon-dratsy.
Ny Alatsinainy 3 aogositra manodidina ny misasak’alina hifoha talata no nitrangan’izany tany amin’ny Village Pilote Vohidiala Gara (MLA), Ambatondrazaka.
“Commune Ambohimangakely miasa ho anao”. Izay no vakin’ny soratra hita tamin’ny takelaka nipetraka tamin’iny lalam-pirenena faha-2 teny Antsahalalina, eny amin’ny toerana manakaiky ny fiviliana mankany Andralanitra iny, ny alatsinainy 3 aogositra.
Nahitana vatan-dehilahy vitsivitsy manadio ny sisin-dalana sy manala ny fasika amam-pako manentsina ny tatatra manamorona ny lalana teny an-toerana.
“Tsy misy ny fifanarahana manokana tamin’ny ministeran’ny asa vaventy. Ny Kaominina Ambohimangakely no tonga dia naka ny fanapahan-kevitra”, hoy ny iray tamin’ireo mpiasa.
“Efa an-taonany maro no tsy nisy fikojakojana ity lalana ity. Ny olona rahateo manana fahazaran-dratsy manary fako anatin’itony tatatra itony. Ny fahavaratra anefa ity efa ho avy ihany”, hoy hatrany izy.
mardi, 04 août 2020 10:40
Etiopia: Aharitra 3-7 taona ny famenoana rano ny barazy lehibe indrindra aty Afrika
Etiopia, izay tany maina tratran'ny hanohanana nampihetsim-po an'izao tontolo izao taona vitsy izay, no naka fanapahan-kevitra anangana barazy lehibe indrindra manerana ny Afrika, amatsiana rano sy herinaratra ho an'ny mponina etiopianina miisa 65 tapitrisa.
Napetrany eo amin'ny reniranon'i Nil izay mamakivaky an'i Egypta ery antendrony avaratry Afrika, mandalo ny sisin-tanin'i Soudan. Miteraka olana ara-politika anefa izany satria dia atahoran'i Egypta sy Soudan hampikorontana ny famatsian-dranon'ny firenen'izy ireo.
Nanomboka ny tapaky ny volana jolay teo anefa dia tazan'ireo mpanara-maso fa mihamitombo ny rano ao anaty barazy, nefa ny fifampiraharahana eo amin'ireo firenena voakasik'ity reniranon'i Nil ity mbola tsy milamina miaraka amin'i Etiopia.